Shon Hetosi गर्ने हो? सुटिङ जसमा फिलिमहरु उहाँलाई गरेका छन्? अभिनेता को व्यक्तिगत जीवनको बारेमा के जानिन्छ? उहाँले अमेरिकी सिनेमा मा आफ्नो क्यारियर कसरी राम्रो विकास? यी र अन्य प्रश्नहरूको जवाफ कलाकार को जीवन र काम हाम्रो सामाग्री पाउन सकिन्छ।
Shon Hetosi, लेख मा देख्न सकिन्छ फोटो जो, फ्रेडरिक, मेरील्याण्ड को अमेरिकी शहर मा जन्म भएको थियो डिसेम्बर 29, 1975। भविष्यमा अभिनेता को पिता ग्राफिक डिजाइन गरिरहेको, आफ्नो परिवार समर्थन गर्न। आमा उधारो को क्षेत्र मा एक विशेषज्ञ छ।
एक प्रारम्भिक उमेर देखि केटा उल्लेखनीय कलात्मक क्षमता देखाउन थाले। आमाबाबुले समय याद र झुकाव शन स्थानीय थिएटर मा dramatics को विकास मा स्कूल उहाँलाई ड्राइव गर्न थाले। सुरुमा, मान्छे को पनि सफल छैन प्रदर्शन थियो। तथापि, मेहनत र एक प्रसिद्ध अभिनेता बन्ने आफ्नो सपना हासिल गर्न इच्छा अन्ततः चुक्ता। पनि उच्च स्कूलमा, Shon Hetosi उच्च अंक थिएटर आलोचकहरु प्राप्त गर्न थाले। चाँडै, प्रतिभाशाली जवान रोशनी र टेलिभिजनमा, जब यो थाले प्रचार भिडियो गोली आकर्षित गर्न।
1995 देखि एक जवान थिएटर अभिनेता सक्रिय चलचित्रमा कार्य गर्न थाले। त्यतिबेला Shon Hetosi लोकप्रिय टिभी परियोजना को उत्पादकहरु देखेको थियो "Homicide।" श्रेणीमा, इच्छुक अभिनेता माध्यमिक गए, तर एकदम प्रमुख भूमिका वर्ण नाम Laul वार्नर।
चलचित्र मा debut पछि वर्षमा Shon Hetosi कहिले काँही स्क्रिनमा देखिने, चलचित्र बरु anadromous को फिलिम मा भाग। फेरि एक होनहार अभिनेता रूपमा आफूलाई को बोल्न, हाम्रो नायक 1996, उहाँले दिग्गज परियोजना निमन्त्रणा गरिएको थियो जब अन्त्यमा गरे "कानून र व्यवस्था।" यो श्रृंखला मा भाग सम्मान फिलिम को ध्यान आकर्षित गर्न कलाकार अनुमति दिएको छ।
पहिलो गम्भीर सफलता
को शानदार सफलता 1997 मा शन अपेक्षा। यो अवधिमा, अभिनेता आफ्नै क्यारियर सुविधा "द हुलाकी" भनिन्छ फिलिम मा पहिलो डाली थियो। यहाँ, जवान अभिनेता केभिन Costner को पहल मा रोशनी। पछिल्लो निर्देशक र पोस्ट-apocalyptic टेप मा अग्रणी अभिनेता दुवै, का कसरी जीवन आणविक प्रकोप पछि साधारण अमेरिका हुन सक्छन् हेरौं गरे।
जवान अभिनेता गरेको क्यारियर मा मोड Shon Hetosi को सनसनीपूर्ण फिलिम पंथ निर्देशक रबर्ट रोड्रीगेज मा उच्च विद्यालय फुटबल टोली कप्तान प्ले गर्दा 1998 मा भयो - "। यो संकाय" सफल फिलिम क्यारियर मा एक महत्वपूर्ण उपस्थिति पछि शन तेजी Vgoru गए छ। अभिनेता एक दर्जन फिल्म भन्दा संलग्न थियो पछि 2000s को सुरुमा।
आफ्नो पहिलो प्रमुख भूमिका Shon Hetosi 1999 मा ठूलो पर्दामा आएको चलचित्र "पहिलो प्रेम" प्ले। यहाँ कलाकार जस्तै Emmi स्मार्ट र Alek Bolduin रूपमा हलिउड स्टार संग एक फिलिम सेट मा काम गर्न पर्याप्त भाग्यमानी थियो।
पनि केन्द्रीय भूमिका उहाँले शीर्षक एक नाटकीय टेप सिर्जना मा काम सहभागी हुन निमन्त्रणा गरिएको थियो जब, अभिनेता र निम्न वर्ष गए "मानिस borstal जेल को।" ब्रिटिश सरकार को नीति प्रभाव मा, उत्तरी आयरल्याण्ड को मुक्ति को लागि लडेको भन्ने अवैध अर्धसैनिक बल समूह - फिल्म को आइरिस रिपब्लिकन सेना को एक युवा सैनिक को जीवनको दुःखद कथा बताउँछ।
त्यसपछि, दर्शकहरु Shon Hetosi को नाम द्वारा अभिनेता सिक्न जारी राखे। Filmography अभिनेता "Dzhon kyu", "को सीएसआई: अपराध दृष्य अनुसन्धान," यस्ता उच्च प्रोफाइल परियोजनाहरु संग replenished "अल्फा डग", "एम्बुलेन्स"।
2004 मा, अभिनेता श्रेणी "सर्वश्रेष्ठ अभिनेता" मा पुरस्कार स्वर्ण उपग्रह पुरस्कार जित्यो। पुरस्कार "सिपाहीहरूले केटी" फिल्म को शूटिंग मा भाग लिनका लागि शन गर्न प्रस्तुत गरियो।
2007 मा Hetosi फेरि आफूलाई बारेमा कुरा गर्न एक ठूलो दर्शक गरे। कारण गीत Dzhastina Timberleyka वरिपरि Goes के लागि संगीत भिडियो मा आफ्नो उपस्थिति वरिपरि आउनुहुन्छ थियो। उत्तरार्द्ध संग, अभिनेता नाटकीय फिलिम मा संयुक्त सर्वेक्षण पछि राम्रो मैत्री सम्बन्ध थाले "अल्फा डग।"
2009 मा सुरु, शन Hetosi सक्रिय सफल धारावाहिक परियोजनामा संलग्न हुन्छन्। यो अवधि मा अभिनेता सबैभन्दा उल्लेखनीय काम बीच श्रृंखला "आपराधिक मन," "Dexter मा विशिष्ट भूमिकाको हुन सक्छ।" मास्टर शमू ब्रायंट, "Southland" परियोजना मा केन्द्रीय वर्ण को एक को प्रकृति को खुलासा लागि, अभिनेता प्रतिष्ठित फिल्म अवार्ड क्रिटिक्स 'विकल्प टेलिभिजन पुरस्कार लागि उम्मेदवार बीच थियो।
Shon Hetosi: प्रेम जीवन
अभिनेत्री केली अल्बानियाई - 2010 मा, प्रसिद्ध अभिनेता अमेरिकी टेलिभिजन श्रृंखला को तारा को भाग्य गाँसिएको। चाँडै विवाह पछि, Hetosi भावि पत्नी गर्भवती छ कि यो रिपोर्ट थियो। हाल, आनन्दित आमाबाबुले आफ्नो पहिलो-जन्म, Maykl लियो नाम दिइएको थियो को शिक्षामा संलग्न छन्।
Shon Hetosi: चलचित्र
क्षणमा, छ भन्दा बढी दर्जन परियोजनामा भाग अभिनेता को खातामा। हामी सानो भूमिकाको Hetosi सूची छैन। Otetim मात्र अभिनेता संग सबैभन्दा सफल चलचित्र:
"कानून र व्यवस्था।"
"कहीं तर यहाँ"।
"केवल तपाईं र मलाई।"
"अनौठो मानिस आउट"।
"द गोधूलि क्षेत्र।"
«सीएसआई: अपराध दृष्य अनुसन्धान"।
"मेरो नाम अर्ल छ।"
"द लाजरस परियोजना"।
"कानून र व्यवस्था। अरुको अहित गर्ने इच्छा। "
«सीएसआई: अपराध दृष्य अनुसन्धान:। मियामी"
"कानून र व्यवस्था:। लस एन्जलस"
"कानून र व्यवस्था: विशेष भएकाहरू एकाइ।"
"प्रमाण को शारीरिक"।
"द हिड्ने मृत भय।"
यो श्रृंखला "बन्द स्कूल": अभिनेताहरु। वास्तविक नाम "बन्द स्कूल" अभिनेता
होटल ओलम्पिक सूट होटल Apartments4* (रेथिनन, Crete, ग्रीस): विवरण, समीक्षा
विलासिता भिक्टोरिया फल्स
पुरुष र महिलामा आदमको सेब
निक Vuychich: अनिन्य व्यक्ति को जीवनी
चेल्याबिन्स्क को ताल मा आराम: मूल्यहरु, समीक्षा, डेटाबेस र आराम "जंगली"
ठेगाना र मूल्यहरु: मा मास्को रेस्टुरेन्ट Oysters